Esikoleni sabaqalayo kubeka ulwazi zonke izifundo main ukuthi kuyoba kubaluleke kakhulu emfundweni Ngokuzayo wengane. Ngokukhethekile ikhokhelwa ukuze isiRashiya futhi ukutadisha imithetho eyisisekelo futhi imiqondo. Phakathi kwabo, hlala ebalulekile ulwazi mayelana nolimi kanye izingxenye zalo, kuhlanganise into ezifana impande izwi.
Lena umqondo abstract, ngakho izingane bahlangabetana nebumatima uma ukufunda ke. ukuchaza kahle futhi uyabonisa abenza inani layo, kanye orfogrammy eyisisekelo kulo wathola - inkinga Nokho kunzima, kodwa doable.
Kufanele kuqashelwe ukuthi impande igama ingxenye yalo kuphela esibophezelayo. Okunye morphemes kungenzeka zingatholakali ngamagama athile, kodwa ngaphandle impande amazwi abekho, ezinye zazo kungaba kuphela akhathazeke ukuthi ingxenye. Ukuze bathi lokhu morpheme linencazelo lucebe ka lonke incazelo yegama elithi ilungile, kodwa lokhu akulona nje isici esiyinhloko, ngoba amanye amagama (isibonelo, iningi ihhovisi noma emabito abo) abe impande, okuyinto itholakala khona kuphela futhi kwenye indawo.
Indlela elula umnyombo izwi, iyona ukukhethwa temagama kanye amazwi cognate. Ngokuqondene nabafundi abangaphumeleli ngokuvamile unganikezi Ezimweni eziyinkimbinkimbi, lokhu kwanele. Nokho, kubalulekile ukuthi izibonelo equkethwe morphemes ehlukahlukene nokuthi kwakungafanele efanayo (nge nezinamathiselo ngaphandle kwabo, ne tijobelelo, eziyimpumelelo futhi t. D.). Kuyaphawuleka ukuthi ezinye zezinto ezisemqoka, kukhona onkamisa kudlula ngokushesha noma ongwaqa kushintshana (isib, thatha-ukuthatha izimpande br- futhi ber-, ugijima, ugijima, izimpande kanye beg- bezh-). Ngakho-ke, ukuqondiswa ukukhethwa morpheme, kanye ukukhethwa kwamagama owodwa impande, futhi kufanele kube ngalokho okushiwo lucebe abaqukethwe.
Omunye orfogramm main, ibilokhu wafunda ekilasini lesibili kuthiwa abhanqiwe ongwaqa ku impande izwi. Isibonelo salokhu kuyinto umsindo lizwakalise futhi unvoiced, ezikhonjiswe kwi incwadi lokhu noma leyo ncwadi, kuncike ukuhlolwa. Izingane ngalesi yobudala, ezimweni eziningi, babhala yilokho abakuzwayo, ngakho kumelwe babafundise ukuthola uhlamvu olufunayo. Ukuze ukuhlole lokhu orfogrammy Kumele ukhethe abhanqiwe amazwi, empandeni izwi okuyinto umsindo ufuna. Nokho, kwelinye icala, kuzoba esimweni ababuthakathaka, okungukuthi, ukuphela igama noma inhlanganisela amaqoqo ungwaqa, nakwezinye - ku eqinile. Ngokwesibonelo, igama elithi "iqhwa", kulesi simo, umsindo ngokushaya G ungezwa ngokucacile, okusondele kakhulu izithulu X noma C. Futhi izwi ngendlela iqhwa uye wezwa ngokucacile umsindo ngokushaya ukuthi kumele akhethe ngokutlola phasi ezimweni zombili.
Njengoba abafundi basesikoleni esiphakeme ayikaqondwa waqonda ulwazi theory, kuyafaneleka ngaphezulu ukukhombisa izibonelo practice. Inketho kangcono incazelo ozokufunda kuzokusiza qala ngokwenza ezinye umzimba ukuze izingane bayakwazi ukwakha umthetho yabo futhi baqonde isimiso yayo, ngoba lolo lwazi kuyoba eyizingqabavu kakhulu.
Enye orfogrammy, akukho esingabalulekile kangako, u is kushintshana onkamisa, ombhalo wawo kuxhomeke ezicini eziningana. Kulokhu, lo yenkinga kungadala ukuvela amazwi impande, okungase kuhluke umsindo, isibonelo, notshani izitshalo. Impande lapha rast- ros- futhi, ngesikhathi esifanayo kufanele sinake kakhulu incazelo lucebe ukuthi ziqukethe.
Kufanele ukuthi, ukuze ukuhlola impande izwi futhi orfogrammy abaqukethwe, unikezwa inombolo ngokwanele ezinkulu zamahora hlelo njengoba isikole zamabanga aphansi naphezulu. Kulokhu, iningi labo cha nokuzihlupha sifuna ku ekutadisheni impahla theory, kanye umzimba esisebenzayo elizobhekana ulwazi zezingane.
Lolu dengezi, isilinda endaweni
Izindlela eziningana ukubala iphesenti inombolo (futhi uhlobo efanayo umsebenzi)